यी तीनजनाको यस्तो छ लोभलाग्दो आत्मीयता ! | Lifemandu
यी तीनजनाको यस्तो छ लोभलाग्दो आत्मीयता !
| मंगलबार, १० असोज, २०७४
काठमाडौँ , असोज १० । कुनै पनि प्रतिस्पर्धामा प्रायः वैमनश्य हुन्छ । ईर्ष्या अनि डाह हुन्छ । तर, नेपाल आइडलको फाइनलमा पुगेका बुद्ध लामा, निशान भट्टराई र प्रताप दास एकअर्कामा दुःखसुख साटासाट गर्छन् । सँगै हाँस्न अनि रमाउन चाहन्छन् । कतारबाट नेपाल फर्केका उनीहरू अहिले पनि एकअर्कासँग छुट्टिन चाहिरहेका छैनन् ।
उनीहरूको आत्मीयता देख्दा लाग्छ, प्रतियोगिताको जितहार हुन बाँकी नै छ । अर्थात्, विजेता, फस्ट रनरअप र सेकेन्ड रनरअप भएको अनुभूति उनीहरूमा खासै देखिँदैन ।नेपाल आइडलको फाइनलपछि पहिलोपटक अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग कुराकानी गर्दै तीनैजनाले आआफ्नो अनुभूति साटेका छन् ।
‘लगभग चार महिना सँगै बस्यौं । हामीबीच हरेक कुरा सेयर हुन्थ्यो’, नेपाल आइडल विजेता बुद्ध लामा भन्छन्, ‘अहिले पनि हाम्रो आत्मीयता उस्तै छ । हामी प्रतिस्पर्धी हौं भन्ने कहिल्यै लागेन ।’
नेपाल आइडल विजेता बुद्धलाई भाइ भनेर सम्बोधन गर्छन् सेकेन्ड रनरअप प्रताप दास । बुद्ध पनि मायाले प्रताप दाइ भन्छन् । बुद्ध र निशानबीचको मित्रता देख्दा लाग्छ, उनीहरू प्रतिस्पर्धी नभई सहोदर दाजुभाइ हुन् । ‘प्रतियोगिता सकियो तर हाम्रो यात्रा जारी छ’, प्रतापले भने, ‘यतिका समय सँगै बसेर बिताएका क्षणहरू स्मरणीय छन् । हामी अब अलग हुनु परे पनि एकअर्कालाई जरुर मिस गर्छौं ।’
यो समाचार आजको अन्नपुर्ण पोष्ट दैनिकमा छ ।
ओलीले यसाे भनेपछि मोदी मख्ख
एजेन्सी । पछिल्लो समय भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको ओलीसँगको निकटता र आत्मीयता धर्मबारे पूर्वप्रम तथा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको महत्वपूर्ण वचनबद्धता मुख्य रहेको छ ।
लोभलाग्दो शाहरुख खानको लाइफस्टाइल
लाइफमाण्डु । बलिउडका किङ खानको जन्म सन् १९६५, नोभेम्बर २ मा भएको थियो । हंसराज कलेजबाट आफ्नो अध्ययन पुरा गरेका शाहरुखलाई क्रिक्रेट खेल्न मनपर्छ । उनको मनपर्ने खाना तन्दुरी चिकन हो ।
करोडौं पारिश्रमिक लिने दीपिकालाई संजयले किन दिए ५०० रूपैयाँ ?
काठमाडौँ । दीपिका पादुकोण अभिनित ‘पद्मावत’ विभिन्न विरोध र धम्की झेल्दै रिलिज भयो। रिलिजपछी फिल्मले वक्सअफिसमा लोभलाग्दो कमाइ गर्दै सफलताको झण्डा गाड्यो। हेर्नेजत्तिले दीपिकाको कामको खु